Epp Andrefanambohijanahary : 106 taona vao nisy fanavaozana -
AccueilRaharaham-pirenenaEpp Andrefanambohijanahary : 106 taona vao nisy fanavaozana
21/04/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Zava-dehibe eo amin’ny fampandrosoana ny firenena ny fahanginana satria soatoavin’ny malagasy ny atao hoe “izay mangina volamena”, ary ny hikiakan’ny fahanginana no mafy lavitra noho ny fitabataban’ny vava, araka ny fanambaran’ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina, omaly nandritra ny fitokanana ny Epp, teny Andrefanambohijanahary. Ary ny asa no tokony ampitenenina hoy hatrany ny Filoha, tamin’ny fitenenana manao hoe, “Ny asa no ampiteneno, amin’ny alalan’ny asa ihany no hanehoana ny tena fitiavan-tanindrazana, amin’ny alalan’ny asa ihany no hifanentananareo sy hifanentanantsika hampandroso ny firenena. Raha misy ny te-hihemotra, raha misy ny te-hampitodika anao amin’ny zavatra hafa, lalanao no hizoro mankany aloha, mankany amin’ny fampandrosoana satria izay no andrasan’ny rehetra.”
Satria ity fanavaozana ny sekoly ambaratonga fototra eny Andrefanambohijanahary ity dia efa mitodika amin’ny fototra sy ho avy. Ary ny fampianarana amin’ny fitaizana ny ankizy, ny tanora sy ny olona no hanarenana ny firenena satria ireo ankizy no fanilon’ny firenena sy fanilon’ny ho avy. “Tazomy mafy ny jiro , ny fanilo aminareo izay, raha sendra matimaty, ampireheto dia ampitondray fitiavana sy fifaliana, hitondray fanantenana fa ny fianaranareo hitondranareo amin’ny ho avy mamirapiratra rahampitso. Izany no andraikitrareo amin’izay misy anareo. Ny fianarana izay misy anareo izay atrehanareo izao no hanafaka anareo. Hitondra amin’ny fivelaran’ny toe-tsaina, hitondra amin’ny fahalalana ananan’izao tontolo izao. Izany no ilaina hampandrosoana ny firenena ary indrindra, hanafaka anareo ara-toekarena sy amin’ny fahantrana. Fa amin’izao fotoana izao no hianaranareo ny fiainana”, hoy ny Filoha nitodika tamin’ireo mpianatra madinika.
Arovy ny soatoavina maha-malagasy
Miantso ny rehetra hiaro ny soatoavina malagasy ny Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara amin’ny alalanoatoavina no hanoherana ny fanakorontanana maro samihafa.
Fanavaozana ny Epp Andrefanambohijanahary
Fotodrafitrasa fototra ho amin’ny fampivelarana ny maha olona sy ho fampandrosoana ny firenena indray no nohavaozina sy nohatsaraina omaly, teny Andrefanambohijanahary tamin’ny fitokanana ny Epp izay natrehan’ny Filoha mivady sy ireo mpikambana sasantsasany ao amin’ny governemanta. Sekoly ambaratonga fototra efa niorina 106 taona lasa izay no tontosa sy mijoro indray amin’izao fotoana izao, izay fiaraha-miasan’ny fitondram-panjakana miaraka amin’ny orinasa Filatex. Satria tsy ny fitondram-panjakana ihany no manana adidy amin’ny fampandrosoana ny firenena sy fampandrosoana mijery lavitra fa ny rehetra. Ity sekoly izay ahitana mpianatra maherin’ny 747, ary mpampianatra 13. Ahitana efitrano fianarana miisa 8, birao ho an’ny mpampianatra miisa 2, kianja filalaovana basket ary zaridaina lehibe fakana rivotra ity sekoly vaovao eo Andrefanambohijanahary ity.